Ukusukela nge-11 kaFebruwari ukuya kwi-17 ka-Febhuwari, siza kubhiyozela uMnyhadala weNtwasahlobo ngeli xesha. Ukuhanjiswa kwengingqi kuya kuphinda kuqalise nge-16 kaFebruwari. Ukuhanjiswa kwamazwe aphesheya kuya kuqala kwakhona ngoFebruwari 18. Iqela lethu elinokusebenza liya kusebenza ngoFebhuwari 18 nayo.
Ukuxhasa ukuhanjiswa okukhawulezileyo kwee-odolo kwi-COVID-19 ezinxulumene ne-proudcts efana ne-SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit, siza kugcina umsebenzi wemveliso kwinqanaba elincinci. Sicebisa abathengi bethu ukuba baqikelele ukuhlawula iiodolo ngaphambili kunye neqela lethu lokuthengisa. Siza kusigcina isithembiso sethu sokunikezela ngexesha elifanelekileyo emva kweeholide.
Ngunyaka onzima ngokungaqhelekanga kwi-2020 edlulileyo. Kwaye, bonke abantu bayasokola ngothando lwethu kunye nesibindi. Siyathemba ukuba bonke abahlobo bethu abaxabisekileyo bangaphila unyaka ongcono ngo-2021. Masisebenzisane, ukulwa intsholongwane ye-COVID-19 sibuyise ubomi bethu obuqhelekileyo ngethemba.
Ukukhanya kuya kubususa bonke ubumnyama. Ubomi buya kuqhubeka!
NgoJan 27, 2021